कसरी व्यायाम बिना वजन कम गर्न बेजिया
कसरी व्यायाम बिना वजन कम गर्न
टोय टोरेस | | वजन कम गर्नुहोस्
व्यायाम बिना वजन गुमाउन बढी गाह्रो छ, तर यो असम्भव छैन। अवश्य पनि, तपाईले बोक्नु पर्छ एक धेरै स्वस्थ, विविध, सन्तुलित आहार र सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण कुरा, तपाईले खान्नुहुने भन्दा कम क्यालोरिक सेवनसँग। यसको मतलब यो हो कि यदि तपाइँ व्यायाम गर्नुहुन्न भने, तपाइँले आफ्नो शरीरलाई निष्क्रिय तरिकामा खपत क्यालोरीहरू खर्च गर्न बाध्य पार्नुपर्नेछ।
तसर्थ, तपाईंले थोरै क्यालोरी खपत गर्नु आवश्यक छ ताकि व्यायामको मद्दत बिना तपाईंको शरीरले तिनीहरूलाई जलाउन सक्दछ। अब, यो आवश्यक छ कि तपाईंले राम्रोसँग खानुभएको छ, किनभने अन्यथा तपाईं आफ्नो स्वास्थ्यलाई जोखिममा राख्ने जोखिम चलाउनुहुन्छ र त्यो त्यस्तो कुरा हो जुन कुनै परिस्थितिमा हुँदैन। यदि तपाइँ धेरै वजन कम गर्न आवश्यक छ भने, एक पोषण विशेषज्ञको सेवा लिन उत्तम हुन्छ।
1 तपाईं व्यायाम बिना वजन कम गर्न सक्नुहुन्छ?
2 व्यायामले तपाईंलाई वजन कम गर्न मद्दत गर्दछ
तपाईं व्यायाम बिना वजन कम गर्न सक्नुहुन्छ?
हुनसक्छ तपाईंसँग खेल खेल्ने समय छैन, तपाईंसँग पर्याप्त प्रेरणा छैन, वा तपाईंलाई सायद यो मनपर्दैन। यो सम्भव छ कि कारण यो हो कि तपाईले अहिलेसम्म फेला परेनन् एक उचित व्यायाम तिम्रो लागि। तर जेसुकै कारण, व्यायाम एक अपा be्ग हुनु हुँदैन वजन कम गर्न। अब, यो शारीरिक गतिविधि को मद्दतको रूपमा को रूप मा सरल छैन।
यदि तपाईं अझै व्यायाम गर्न तयार हुनुहुन्न तर वजन घटाउन चाहनुहुन्छ भने, तपाईंले दिमागमा राख्नु पर्छ निम्न सल्लाहहरू जुन तपाईंलाई मद्दत गर्दछन्.
कम क्यालोरीहरू: विशेषज्ञहरूका अनुसार, आदर्श भनेको वजन घटाउने आहारमा %०% आहार र २०% व्यायाम समावेश हुन्छ। अब यदि तपाइँ व्यायाम गर्नुहुन्न भने सक्नुहुन्छ तपाईंले खाएको क्यालोरी कम गर्नुहोस्। तपाईको शरीरलाई त्यति उर्जा चाहिने छैन, तपाईले कार्बोहाइड्रेट घटाउन सक्नुहुन्छ, जसले तपाईलाई तौल घटाउन मद्दत गर्दछ।
एकै समयमा खानुहोस्: यसले तपाईंको शरीरलाई मद्दत गर्दछ अधिक प्रभावकारी क्यालोरी जलाउनुहोस्। तसर्थ, प्रत्येक दिन उहि समयमा खाने प्रयास गर्नुहोस्।
धेरै फाइबर लिनुहोस्: यो तृष्णाशील छ र कम क्यालोरीहरू जस्तै फलफूल, तरकारीहरू वा सम्पूर्ण अनाजहरू जस्ता धेरै खाद्यान्नहरूमा फेला पर्दछ। थप रूपमा, यसले तपाईंलाई मद्दत गर्दछ आन्द्राको ट्रान्जिट नियमन गर्नुहोस् जब सामान्यतया डाईट परिवर्तन हुन्छ।
तपाईं भोकाएको वा तिर्खाएको भने पत्ता लगाउन सिक्नुहोस्: धेरै पटक हामी भोकको भावनालाई तिर्खाले मिल्काउँछौं। निश्चित गर्न, जब तपाइँ भोकाएको महसुस गर्नुहुन्छ सामान्य खाना समय बाहिर, पानीको एक ठूलो गिलास छ र केहि बेर प्रतिक्षा गर्नुहोस्।
सर्वि .्स घटाउनुहोस्: जस्तो तपाईले कम क्यालोरी खानु पर्दछ, त्यसकारण अंश कम गर्नु आवश्यक छ। पीडित छैन भनेर आधा खानाको प्लेटको दृश्य प्रभाव, साना प्लेटहरू प्रयोग गर्नुहोस्। यस तरीकाले, तपाईको दिमागले संकेत पाउँदछ कि प्लेट भरिएको छ र तपाईलाई चाँडै पूर्ण महसुस गर्न मद्दत गर्दछ।
व्यायामले तपाईंलाई वजन कम गर्न मद्दत गर्दछ
यद्यपि यो व्यायाम बिना वजन कम गर्न सम्भव छ, कुनै पनि शारीरिक गतिविधि तपाईं यसलाई प्राप्त गर्न मद्दत गर्दछ। तर केवल तपाईंले छिटो तौल घटाउन सक्षम हुनुहुनेछ, तपाईं राम्रो महसुस पनि गर्नुहुनेछ, तपाईंसँग राम्रो मुड छ र अधिक टोन्ड र स्वस्थ देखिन्छ कुनै समय मा। तपाईंलाई मन नपर्ने खेलहरूको बारेमा नसोच्नुहोस्, किनकि तपाईं पदयात्रा गर्न सक्नुहुन्छ, घरमा नृत्य गर्न सक्नुहुन्छ वा केही योगको आनन्द लिन सक्नुहुन्छ।
सन्तुलन कुञ्जी हो, यो स्वस्थ जीवनशैली बानीहरूको योग हो। किनभने तौल राम्रोसँग हराउने, होशियारीका साथ, केहि किलो बोक्ने र बढीको जीवन जारी राख्न मात्र समावेश छैन। बरु, यसले खाने को तरीका, भित्र परिवर्तन गर्ने समावेश गर्दछ शरीर राम्रो हुन के चाहिन्छ भन्ने बारे सचेत रहनुहोस्.
आवश्यक नभएको कुनै चीज हटाउनुहोस्, जस्तै मदिरा वा प्रसंस्कृत उत्पादनहरू। प्राकृतिक, ताजा र मौसमी खाना खानाहरू बानी बद्ली गर्न उत्तम तरीका हो। राम्रोसँग खानको लागि बानी राख्नुहोस्, सन्तुलित र विविध तरिकामा र चाँडै तपाईं आफ्नो शरीरमा यी परिवर्तनहरू देख्न सक्नुहुनेछ।
र सम्झनुहोस्, यदि तपाईंलाई धेरै किलो हराउनु पर्छ भने, यो सल्लाह दिइन्छ कि तपाईं फलो-अपका लागि डाक्टरको अफिसमा जानुहोस्। स्वास्थ्य सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण हो र तपाईको स्वास्थ्यलाई वेवास्ता गर्दै तौल गुमाउनु, यो पक्कै पनि एकदम नराम्रो संयोजन हो.
लेखको पूर्ण मार्ग: बेजिया » स्वास्थ्य » वजन कम गर्नुहोस् » कसरी व्यायाम बिना वजन कम गर्न
लुगाबाट रगत हटाउने तरिका